ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-27 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်သည်သင်၏မွေးမြူရေးခြံမြေပြင်ကွင်းဆင်းသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားအတွက်တပ်ဆင်မှုအတွက်လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခြံစည်းရိုးရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့vinyl မြင်းခြံစည်းရိုး သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုက်ညီသောခြံစည်းရိုးရွေးချယ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်မြင်းခြံစည်းရိုးအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်အဖြေကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
မြင်းများအထူးသဖြင့်ပွင့်လင်းမြို့ဆင်ခြေဖုံးများတွင် ပို. ပို. ရတဲ့နေကြသည်။ အသစ်သောကျက်စားရာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူဟောင်းနွမ်းဂုဏ်သတ္တိများလည်းမြင်းများစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြင်းခြံစည်းရိုးအရေးပါသောပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ မြင်းသည်ယခုမကြာခဏမြင်းအမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆလူဦးရေရဲ့သိပ်သည်းဆချဉ်းကပ်ကြောင်း, ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေအနီးချထားပါသည်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မြင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ညာဘက်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးရွေးချယ်ရာတွင်မီ, ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အရာအမျိုးအစားမြေပြင်အနေအထား၏မြေပြင်အနေအထား, ကုန်ကျစရိတ်, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စီစဉ်ထားသည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စဉ်းစားရပါမည်။
တစ်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်တဲ့အခါလိုအပ်အဖြစ်, တဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလယ်ယာကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်မြင်းများအသီးအသီးမြင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားသည်။ သငျသညျနှစျဦးမှလေးသံလမ်းနဲ့ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်မည်မျှခြံစည်းရိုး၏ခွထောကျသင်လိုအပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင်ကအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်လျှင်, သင်ခြံစည်းရိုးကျွမ်းကျင်သူများတိုင်ပင်မြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသိကျွမ်းခြင်းပညာမှအကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံအဆိုပါခြံစည်းရိုး, ကျီများနှင့်တံခါးများချထားပါသည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့လယ်ယာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့စီးပွားရေးအရ run နိုင်ပါတယ်, သင်၏ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်ကဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤသည်ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးဆွေးနွေးပွဲရှိပြီးလွန်ခဲ့သည့် 10 နှစ်အတွင်းအကြီးအတိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောခြံစည်းရိုးစနစ်ဖြစ်သည်။ သည်အခြားဒြပ်ထုတ်ကုန်လိုပဲ, ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုနှိမ်နင်းဖို့ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမထိတွေ့လာသည့်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအလွယ်တကူသည်မြင်းကိုက်ကြသည်မဟုတ်။ ကရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိပါတယ်ဗီနိုင်းကော်လံများနှင့်လမ်းပြသံလမ်းခြယ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နီးပါးမျှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (အချို့နေ့စဉ်အစွန်းအထင်း မှလွဲ. ) လိုအပ်ပါသည်ဘယ်တော့မှ: ထိုမှတပါး, သစ်သားကျော်များစွာသောအခြားအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အချို့ကိစ္စများတွင်အဆိုပါသံလမ်းကိုအလွန်မြင်းဒဏ်ရာများ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည့်မြင်းကလှုပ်ခတ်သည့်အခါ eject တွင်းသို့မဟုတ်အထူးကွင်းခတ်ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
အသစ်တစ်ခုကိုဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးမဝယ်ခင်စဉ်းစားရန်များစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်။ ခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားကန့်သတ်စေခြင်းငှါမဆိုဒေသခံနည်းလမ်းများရှိပါသည်လျှင်ပထမဦးစွာထွက်ရှာပါ။ ထို့နောက်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဆုံးဖြတ်ရန်: ကသင့်ရဲ့မွေးမြူရေးခြံသို့မဟုတ် paddock အပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သောရှိမရှိ။
သင်တစ်ဦးဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုး, မြေပြင်အနေအထား, မြေဆီလွှာနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေ install လုပ်ချင်သောအခါ, အရေးအပါဆုံးအရာ, installed နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အာကာသထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာမြင်ကွင်းနှင့်မဆိုအထူးလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်ရှိမရှိ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်စီမံကိန်း၏ဘတ်ဂျက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် installation လုပ်န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ သင်သည်အခြားစျေးသည်များနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးရဲ့ features တွေကိုတချို့ရှိနေပါတယ် :.
မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်မှုများအတွက်·ရထား-သော့ခတ် TM အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်မှုစနစ်အား
မွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လို မွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြ ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြ မွေးမြူရေးခြံလက်ရန်း